तिलावे पुल बनाउन माँग गर्दै पर्सा प्रशासनमा धर्ना, निर्माण नहुदा सम्म आन्दोलन निरन्तर Esimana.com || Simana Media Pvt. Ltd.
इसीमाना सम्वाददाता २०७८ कार्तिक २२ गते ०३: ५८ मा प्रकाशित 275 पटक पढिएको
तिलावे पुल बनाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा युवाको समहुले धर्ना दिएको छ । पुल निर्माणकालागि बनाइएको दवाव समुहले धर्ना दिएको हो ।
तिलावे पुल निर्माणकालागि २०७३ साल असारमा सम्झौता भएको थियो । पर्साको क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सासद हरिनारायण रौनीयारले स्थापना गरेको पप्पु कन्ट्रकशन र लुम्बिनी बिल्डर्सको संयुक्त परियोजना अन्र्तगत निर्माणको ठेक्का सकार गरेका थिए । तर सम्झौता भएको यत्रोलामो अवधी हुदा समेत पुल बनेको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालयका अनुरा अहिले सम्म ६७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । पप्पुले काम नगरेर फरार भएपनि अर्को साधmेदार ठेकेदार लुम्बिनीलाई पुल निर्माण्को जिम्मा दिइएको थियो । तिलावे पुल निर्माणकालागि ३ वर्ष पप्पु र २ वर्ष लुम्बिनीले ब्यतित गरेका छन ।
यति लामो समयमा पुल बन्न नसकेकोले युवाहरु आन्दोलीत भएका हुन । युवा अगुवा राकेश यादवले सम्झौता अनुसार काम नहुदा कुनै दण्ड नदिइने कस्तो ब्यवस्था हो भन्दै प्रश्न गरेका छन ।
दैनीक हजारौ नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ यादवले प्रश्न गरे राज्यका संयन्त्रहरुले यो कहिले देख्ने ? । यादवले राज्यको पैसा लिएर ठेकेदारहरुले आफनो स्वार्थपूर्ती गर्ने जनताले दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्यकालागि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । त्यही भएर सोमवार ( आज ) पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा धर्ना दिएका हौ यादवले भने ।
पुल बनाउन दवाव दिने उद्देश्यले गठित दवाव समुहले सोमबार प्रशासनमा धर्ना दिएको हो ।
निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पुरलुम्बिनी जेभि(जोइन्ट भेन्चर) ले ६ वर्षमा पनि पुल नबनाउँदा सर्वसाधारण मर्कामा छन् । धर्नामा सहभागीले तिलावे पुल कहिले बन्छ ? जबले तिलावे पुल बन्नीना तबले आन्दोलन रुकीना । लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
तिलावे पुल नबन्दासम्म दवावको कार्यक्रम जारी राख्ने दवाव समुहका अगुवा राकेश यादवले बताए ।उनीहरूले यसअघि पुल बनाउन माग राख्दै स्थानीय प्रशासन, हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय, पर्साका प्रमुख राजनीतिक दल मुलुकका शिर्ष नेतालाई एसएमएस पठाएर ध्याकर्षण गराएका थिए ।